नेपालको इतिहासमा असोज | Nagarik News - Nepal Republic Media
नेपालको इतिहासमा असोज
३० आश्विन २०७५ २० मिनेट पाठ
पृथ्वीनारायण शाहको दबदबा वि.सं. १८२२ बढेको थियो र उनको सेना काठमाडौँ राज्यको शोभा भगवतीको वरिपरि आइपुगेका थियो । सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई पूजा गर्नका लागि शोभाभगवती नजिकैको विष्णुमतीको पानी ल्याउनुपथ्र्यो । त्यो बेला गोर्खालीहरु शोभा भगवतीछेउमै आइसकेको हुनाले पूजारी (गुभाजु)हरु त्यहाँ जानु सम्भव भएन । काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लले केही सिपाहीको व्यवस्था मिलाई पूजारी शोभाभगवती गई, विष्णुमतीबाट पानी ल्याई मच्छिन्द्रनाथको पूजा गरे भन्ने बयान पाइन्छ ।
उता पाटनमा राजा तेजप्रकाश मल्ल थिए । तेजप्रकाशको तेज त्यो बेला नै निभिसकेको थियो । उनीभन्दा बलिया पाटनका मन्त्री थिए । पाटनका ६ प्रधानका नाउँमा उनीहरुले शासन चलाइरहेका हुनाले र मनपर्दी गरेका हुनाले जनता न राजाबाट सन्तुष्ट थिए न त प्रधानहरुबाट नै । यो कमजोरी थाहा पाएका पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्नै परेन । वि.सं. १८२५ असोज २० गते पाटनका राजा तेजप्रकाश र काठमाडौँबाट भागेका राजा जयप्रकाश पाटनबाट भागेर भक्तपुर पुगे । वि.सं. १८२५ असोज २४ गते गोर्खालीहरु सजिलैसँग पाटन सहर प्रवेश गर्न समर्थन भए।
पृथ्वीनारायण शाह सकेसम्म मान्छे नमरुन् भन्ने चाहन्थे । लुट्ने मान्छेले सकेसम्म बढी क्षति पार्ने प्रयास गर्छ । उनको यो मनसाय थिएन । उनी शासन गर्न चाहन्थे । शासन गर्नेले जनताको मन जित्नैपर्छ । उनीहरुको चित्त दुखाएर शासन सञ्चालन हुन सक्तैन । तर जब भक्तपुरमा गोर्खाली सेना छि-यो, घमासान युद्ध भयो । गोली लागेर जयप्रकाश घाइते भए र भक्तपुर विजय भएको वि.सं. १८२६ मंसिर १ गतेको ६ दिनपछि मंसिर ७ गते उनको निधन भयो ।
आफ्ना मितबुबासमेत रहेका रणजित् मल्ललाई उनकै मागअनुसार माघ १ गतेको साइतमा काठमाडौँ हुँदै काशीबास पठाए । वि.सं. १८२८ जेठ १३ गते डेढ वर्षको काशीवासपछि काशीमै रणजित मल्लको मृत्युभयो ।
भीमसेन थापाको अवसानपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलो अस्थिरता देखिन थाल्यो । यसको कारणमा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह कमजोर हुनु पनि हो । उनी कमजोर भएपछि दुई रानीहरु साम्राज्यलक्ष्मी र राज्यलक्ष्मीबीचको चलखेलले पनि बढी स्थान पायो । जब मूल शासकमा कमजोरी आउँछ, भाइभारदारबाट गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कमी हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । यस्तै परिवेशमा कहिले अंग्रेजसँग मित्रभाव लिने, कहिले अंग्रेजको राज्यअन्तर्गतको प्रदेशमा सैन्य पठाएर आक्रमण गर्ने, अंग्रेजको धम्की आएपछि लुरुक्क फर्कनेजस्ता कमजोरी देखाउन थालियो । अब शासनमा केही स्थिरता दिनुप-यो भन्ने भावना पलाउन थाल्यो । सोहीअनुरुप भारततिर रहेका भीमसेन थापाका भतिजा माथवरसिंह थापालाई झिकाइयो ।
माथवरसिंह थापा नेपाल भित्रिदा जेठी रानी साम्राज्यलक्ष्मीको निधन भइसकेको थियो । राज्यलक्ष्मीको जगजगी भइरहेको थियो । राज्यलक्ष्मीको विरुद्ध कसले पो बोल्न सक्ने ? साम्राज्यलक्ष्मीका दुई छोरा थिए, सुरेन्द्र र उपेन्द्र । राज्यलक्ष्मीका पनि दुई छोरा थिए, रणेन्द्र र वीरेन्द्र । राज्यलक्ष्मी भने आफ्ना छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउन खोज्थिन् ।
माथवरसिंह थापाले न राजा राजेन्द्रलाई खुसी पार्न सके न त रानी राज्यलक्ष्मीलाई । राजा बेखुस हुनुको कारण चाहिँ उनी आउनेबित्तिकै आफ्नो चुरिफुरी देखाउन थाल्नु थियो । त्यो राजाले रुचाएका थिएनन् । रानीको प्रस्ताव रणेन्द्रलाई राजा बनाउने कुरा पनि माथवरसिंह थापाले मानेनन् । त्यसैले माथवरसिंहको हत्या हुन पुग्यो । यसको केही समयपछि चौतरिया फत्यजंग शाहको नेतृत्वमा गगन सिंह, जंगबहादुर र अभिमानसिंह रानामगरसहितको चार जनाको मन्त्रिमण्डल गठन भयो । रणेन्द्रलाई राजा बनाउने उद्देश्यका साथ गगनसिंह पनि अघि बढे । यसबाट बेखुस भएका अर्को पक्षले गगनसिंहले पूजा गरिरहेका बेला उनको हत्या ग-यो । आफ्नो छोरालाई राजा बनाउने सूत्रको हत्या भएपछि रानी राज्यलक्ष्मी उग्रचण्डी भइन् ।
गगनसिंहलाई कसले हत्या ग-यो ? यो कुरा पत्ता लगाउन कोतमा भारदारी सभा बोलाइयो । रात्रिकालिक बैठकमा कति आए, कति आएनन् तर मुख्य व्यक्तिहरु भने भेला भए । जब गगनसिंहको हत्याका प्रसंगमा चर्का आरोपप्रत्यारोप हुन थालेपछि कतिपय बाठा मानिसहरु लुसुक्क निस्किए । राजा राजेन्द्रले विवाद लम्बेको हेर्न सकेनन्, उनले केहीलाई चुप लगाउने प्रयास पनि गरे तर रानी राज्यलक्ष्मीले आँखा तरेपछि उनी बैठकबाटै बाहिरिए । उनी अंग्रेज दूतलाई भेट्न लैनचौर पुगे ।
फत्यजंग शाह र अभिमानसिंह राना राजाका मान्छे भनेर चिनिन्थे भने गगनसिंह र जंगबहादुर रानीका मान्छे भनेर चिनिन्थे । अभिमान सिंहले गगनसिंहलाई जंगबहादुरले मारेको हो भनी कोतमा हल्ला गरेपछि जंगबहादुर र उनका भाइले काटमार सुरु गरिहाले । वि.सं. १९०३ भदौ ३१ गतेको यस घटनामा ३० भन्दा बढी मानिस मारिए ।
रानीले भण्डारखालपछि ठूलो बेइज्जत भोग्नुप-यो । उनी व्यभिचारिणी थिइन् भन्ने कुरा जनजनमा पु-याइएको थियो । उनको नाम गगनसिंहसँग जोडिएको थियो । रानी राज्यलक्ष्मीले गगनसिंहसँग प्रेम गरेको घटना भने उति विश्वसनीय देखिँदैन । वि.सं. १८७४ मा रानी राज्यलक्ष्मी जन्मिएकी थिइन्, गगनसिंह वि.सं. १८५३ मा जन्मिएका थिए । उमेरमा २० वर्षको फरक भएको नोकरसँग कुनै रानी सल्किएको कुरा उति विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । बूढाले तरुनी खोज्नु र बूढीले पनि तरुनालाई नै आँखा लगाउनु विश्वासिलो मान्न सकिएला । तर बूढो नोकरमाथि रानीले आँखा लगाइन् भन्नु भनेको उनको बेइज्जती गर्ने एउटा खेलो थियो भन्ने लाग्छ ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७५ १६:१५ मंगलबार
रुकुम घटनाको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिलाई कारवाही गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै मंगलबार दलित अधिकारकर्मी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।